Ndị Taliban na -eweghara ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai echi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan » Ndị Taliban na -eweghara ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai echi
Akụkọ na -agbasa ozi na Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
Ndị Taliban na -eme mkparịta ụka na Turkey na Qatar gbasara njikwa ọrụ nke ọdụ ụgbọ elu.
Ndị Taliban ga -eweghara ọdụ ụgbọ elu Kabul mgbe mwepụ US gasịrị.
Ndị Taliban chọrọ Turkey na Qatar ka ha nyere aka n'ịrụ ụgbọ elu Kabul.
Ndị agha US ga -esi na Afghanistan pụọ na August 31.
Dị ka akụkọ ndị ọhụrụ siri kwuo, ndị Taliban ga -eweghara ọdụ ụgbọ elu mba Kabul Hamid Karzai echi, mgbe mwepụ nke ndị agha US na Afghanistan na Tuesday, Ọgọst 31.
Dị ka ọ dị na mbụ kọrọ na mbụ, ndị Taliban na -eme mkparịta ụka Turkey na Qatar gbasara njikwa teknụzụ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu. Akụkụ ndị ahụ abịabeghị nkwekọrịta.
Tupu mgbe ahụ, ọnụ na -ekwuru ndị ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Taliban na Qatar, Mohammad Suhail Shaheen, kwuru na ngagharị iwe ahụ nwere nchekwube maka mwepụ zuru oke nke ndị agha mba ofesi na Kabul. Ọdụ ụgbọ elu mba Hamid Karzai.
Mgbe US kwuputara ngwụcha ọrụ afọ iri abụọ ya na Afghanistan na mmalite mwepụ ndị agha ya, ndị Taliban bidoro mwakpo megide ndị agha gọọmentị Afghanistan. N'August 20, ndị agha Taliban batara na Kabul na -enweghị nsogbu ọ bụla, na -eguzobe ike zuru oke n'isi obodo Afghanistan n'ime awa ole na ole.
Onye isi ala Afghanistan Ashraf Ghani hapụrụ mba ahụ, ebe osote onye isi ala Amrullah Saleh kwupụtara na ya bụ onye isi ala ma kpọọ oku ka e guzogide ndị Taliban. Ọtụtụ mba emela mkpọpụ mberede nke ụmụ amaala ha na ndị ọrụ nnọchi anya na Afghanistan mgbe ndị Taliban weghachisịrị.